Ciidamada Puntland oo ku sii siqaya Degmada Qandala | HOYGA WARARKA CAALAMKA
Ciidamada Puntland oo ku sii siqaya Degmada Qandala
Qandala: Ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ayaa kaabiga ku haya degmada Qandala ee Gobolka Bari, halkaasoo todobaadkii hore qabsadeen dagaalyahano ka tirsan Daacish, iyadoo hubaal la’aan ay ka jirto degmada, oo ay ka barakaceen dadkii ku dhaqnaa.
Maraakiib dagaal iyo diyaarado ayaa saacadihii la soo dhaafay duqeynayay deegaanka, inkastoo aan la ogeyn khasaaraha ay geysatay duqeynta, waxaana xeebta deegaanka ku soo dhowaaday maraakiib dagaal la rumeysan yahay inay yihiin kuwa Gaashaanbuurta NATO.
Wararka ayaa sheegaya in maraakiibta dagaalka ay xeebta ka ilaalinayaan deegaanka, si aanay Daacish saanad milateri ugaga imaan dhinaca Badda, maadaama deegaanka Qandala ay saaran tahay Badda Cas oo xuduud dhinaca badda ka wadaagaan Yemen.
Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas oo shalay dib ugu laabtay Garoowe waxa uu sheegay in Qandala aanay sii heysan karin Daacish, lana soo afjari doono maalmaha soo socda.
Saraakiil ka tirsna Puntland ayaa sheegay inay ciidankooda ay dhowr jiho kaga ruqaansadeen Qandala, si ay uga saaraan dagaalyahanada Daacish, waxaana magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe ka ambabaxay ciidamo aad u fara badan, kuwaasoo isugu jira ciidamada gaarka u tababareen Mareykanka iyo kuwa kale.